Manni murtii Laayibeeriyaa filannoo pirezidantii dhaabsise - BBC News Afaan Oromoo
Manni murtii Laayibeeriyaa filannoo pirezidantii dhaabsise
Madda suuraa, Reuters/ EPA
Taphataan kubbaa miilaa duraanii Joorj Wiihaa fi pireezidantii itti aanaan Joseef Bowaki
Manni murtii waliigalaa Laayibeeriyaa filannoo pireezidaantummaa marsaa lammataa kibxata dhufu gaggeeffamuuf qophiin taasifamaa jir akka dhaabbatu ajaje. Kunis filannoo marsaa duraa keessa hanni ture himannaan jedhu erga dhagaahamee booda.
Taphataan kubbaa miilaa duraanii Joorj Wiihaa fi pireezidantii itti aanaan Joseef Bowaki filannoo marsaa duraan qabxii qixa waan argataniif, Onkoloolessa 7 akka waliin morkatan karoorfamee ture.
Haa ta'u malee kaadhimama Paartii Liibartii kan ta'eefi filannoo marsaa duraan sadaffaa irra kan ture, Chaarlas Biruumsikiinee, qabxiin filannoo marsaa duraa sirrii miti jechuun himatan.
Filannoo ji'a darbee, waraana waliinii bara 2003 booda filannoo walabaa isa jalqabaa biyyattiin gaggeessite dha.
Bu'aan filannichaa erga ifoomee booda poolisiin kora bittinneessaa mana murtii fi komiishinii filannoo akka tiksu godhameera.
Pireezidantiin amma jiran eenyu deeggaru?
Obbo Biruumsikiinee fi paartiin isaanii Liibartiin, buufataaleen filannoo yeroon banamuu dhabuun namoonni akka hin filanne gufuu ta'uu dabalatee filannoon marsaa duraa "hannaa fi rakkoolee gurguddoo kan qabu ture," jedhu.
Himannaan kun hamma qulqullaa'uutti guyaan filanno akka dheeratu murteesse manni murtii.
Osooma himannaan isaa fudhatama hin argannees, koomishiniin qophii barbaachisaa waan hin xumuriiniif filannoon torbee dhufuu kun harkifachuun isaa waanuma hin oolle ture.
Himannaan filannoo marsaa dura keessa hanni tureera jedhu kan paartii Liibartii qofa miti, paartii pireezidantii itti aanaa Bowaki, Yuunitii dabalatee paartileen biroo lama himannaa kana ni qooddatu.
Pireezidantiin amma biyyattii bulchaa jiran Eelan Joonsan Sarleef adeemsa filannichaa gidduu galanii jiru jechuunis paartiin Yuunitii himateera.
Pireezidantii dubartii Afriikaa kan jalqabaa fi injifattuun badhaasa Noobeelii nagaa Eelan Joonsan Sarleef, qabxii filannoo irratti dhiibbaa geessisaniiru jedha himannaan paartichaa.
Madda suuraa, AFP/Getty
Eelan Joonsan Sarleef itti aanaa isaanii deeggaruu dhabuun himataman
Hariiroon Sarleef fi itti aanaa isaanii ho'aa miti. qondaaltonni paartii biyya bulchaa jiruu tokko tokko, Sarleef itti aanaan isaanii akka bakka isaanii bu'u hin fedhan jechuun gabaasaan BBC Paayee Laayilee magaala guddittii biyyatti Munorooviyaa irraa gabaasee jira.
Manguddoo ganna 79, kan ta'an Sarleef garuu itti aanaa isaanii dhibbeentaa 28.8 mo'atan Bowakii, dhibbeentaa 38.4 kan mo'atan Wiihaa caalaa dachaan deeggaruu isaanii himan.
Paartiin Joorj Wiihaa 'Congress for Democratic Change', "paartiin waggoota 12'f biyya bulchaa ture yeroo boo'u arguun nama gaddisiisaadha" jechuun dhimmicharratti deebii kennee jira.
Pireezidant Sarleef kanneen adeemsa filannichaa keessatti qooda fudhatan hundi, filannoon naga qabeessa ta'uusaa mirkaneessuu akka qaban waamich agodhaniiru.
Gamtaa Awurooppaa dabalatee taajjabdoonni idil-addunyaa rakkooleen mul'atanillee filannoo marsaa duraa irratti gaaffii cimaa hin kaasne jedha gabaasni AFP.
Manni murtii paartiin Liibartii fi Komishiniin filannoo dhimmicha irratti himannaa isaanii akka dhiyeeffatan Kamisatti beellame.
Ajaja mana murtii kamiyyuu akka kabajan, dubbi himaan komishinii filannoo biyyattii BBC'tti himee jira.
Filannoo Laayibeeriyaa: Taphataan duraanii Joorj Wiihaa dursaa jiru
Lammiileen Laaybeeriyaa nama Elan Joonsan Sarliif bakka buusan filachuufi